05/05/2018 - Page 2 sur 3 -
Alakamisy Fenoarivo : Telolahy nisoloky ho mpiasan’ny Jirama
Natolotra ny fampanoavana omaly ireo telolahy tra-tehaka tamin’ny fisandohana andraikitra ho mpiasan’ny jirama rehefa nahavita ny fanadihadiana azy ireo ny mpitandro filaminana nisahana ny raharaha nanenjehana azy ireo. Ny alatsinainy teo araka ny fampitam-baovao dia …Tohiny
Tanjombato : Vehivavy maty nitsoraka tao amin’ny ranon’Ikopa
Vehivavy 34 taona no namoy ny ainy rehefa nitsambikina tao amin’ny ranon’Ikopa eny Tanjombato, omaly tokony hi tamin’ny 04 ora tolakandro. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny mpitandro filaminana eny an-toerana, dia nifamaly tamin’ny vadiny …Tohiny
Rn2 : Niboraka ny tsinain’ilay lehilahy voahitsaky ny kamio
Zava-doza indray no nitranga tany amin’ny lalam-pirenena faharoa, tany Tanandava Barikadimy Toamasina omaly. Rangahy iray voahitsaky ny kamio efa potika tanteraka no hitan’ny olona nitsirara teny afovoan’ny arabe. Niboraka ary niparitaka ny tsinain’ity niharan-doza ity. …Tohiny
Nandritra ny fandaharana fotoam-bita izay fanaon’ ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina isaka ny zoma hariva no nanambarany fa tsy misy ny tonga lafatra eto an-tany, saingy kosa na izany aza dia tsy hisy afaka hiteny …Tohiny